DHEGEYSO-Nin 40 jir ah oo meydkiisa laga helay duleedka Burtinle. – Radio Daljir
Agoosto 9, 2016 3:02 b 0
Burtinle, Aug 09 2016-Dagmada Burtinle ee Gobolka Nugaal ayaa waxaa saaka lagahelay mayd nin dadiisa lagu sheegay in uujiro 40 sano kaas oo ay dadka deeganka ay ku soo wargaliyeen maamulka dagmada iyo ciidamada ammaanka ee saldhigga Burtinle.
Meydka ninkaan ayaa waxaa lagu arkay barkad deegaanka kutaala oo ay biyaha laga cabo sida warsidaha Puntlandnews usoo sheegay Xaafid Cabdirisaaq oo ahaa xoghayihi hore ee degmada Burtinle, kaasoo kamid ahaa dadka arkay ninkaan.
Hadaba si aan faah faahin uhelno Waxaan arimahaasi aan ka waraysanay Taliye ku xigeenka Booliska dagmada Burtinle Dhame Maxamuud muuse Bile Farda Fuul. wuxuu Waramay Wariye Xasan Heykal oo kusugan Daljir Bosaaso.
DHEGEYSO-Galmudug oo Puntland ku eedaysay ciidamada lageeyey Galkacyo.